JINGHPAW KASA: သတိ
မင်းတို့ ကိုယ် တိုင် က ဗမာ စစ် တပ်ဆို တဲ့
အသုံး အနှုန်း မသုံးနဲ့ ကွ ။ စစ်တပ် ထဲ မှာ
တိုင်းရင်းသား တွေလဲ ပါ တယ်။ ဗမာ စစ်တပ်
ဆို တဲ့ စကား လုံး ဟာ တိုင်းရင်းသား စည်း
လုံး ညီညွတ် မှု ကို သွေးခွဲ တာ ပဲ ။ မြန်မာ နိုင်
ငံ ရဲ့ အစိုးရ ထဲ မှာ လဲ တိုင်း ရင်းသား တွေ
လဲ ပါ တာ ပဲ ။ မင်း တို့ က ဗမာစစ် တပ် ဆို
ပြီး သုံး နေသရွေ့ တိုင်းရင်း သား အချင်းချင်း
သွေး ခွဲ တဲ့ အထဲမှာ မင်း တို့ က အဓိက
တရားခံ ပဲ ။ မင်းတို့ ဗမာ စစ်တပ် ဆို ပြီး သုံး
နှုန်း တာဟာ တပ်ထဲ က ငါတို့ တိုင်း ရင်း သား
တွေကို စော် ကား တာပဲ ။ ငါတို့ တပ်ထဲ ဝင်
တာက ဗမာနောက် လိုက် လုပ်ဖို့ မဟုတ် ဘူး
ပြည် ထောင်စု စိတ်ဓာတ် နဲ့ အလုပ် လုပ် တာ
မင်းတို့ ကချင် စစ် တပ် ကမှ လူမျိုး ကြီး ဝါ ဒ
သမား တွေ ပဲ ။ မင်းတို့ KIA ကရော တိုင်းရင်း
သား ဘယ်နှ မျိုး ကို ကိုယ် စား ပြု သလဲ ။
ငါက ဗမာ မဟုတ် ဘူး ရှမ်းလူမျိုး ပဲ ။ ငါ ရော
ငါ့ ရဲ အဖေ ရော က မြန်မာ့ တပ် မတော် မှာ
အမှု ထမ်း နေ တာ ဗမာ နောက်လိုက် လုပ်
ချင်လို့ မဟုတ်ဘူး မြန်မာ့ တပ်မတော် က တိုင်း
ရင်သား အားလုံး ကို ကိုယ် စား ပြု တာ မို့ ပဲ ။
မင်းတို့ ကသာ အတွေး အခေါ် တွေ လွဲ နေ
တာ ။ ဗမာ စစ် တပ်ဆို တဲ့ စကား လုံး နဲ့
ငါတို့ ကို မစော် ကား နဲ့ ။
အားခေါင်ရေ မင်းတို့အတွေးအခေါ်တွေလွဲနေတယ်။ဒါကြောင့်မို့လဲ နားတစ်ဖက်ပေါက်လို့ပြောခံရတာ။ငတုံးတွေ အိမ်ထောင်စုတစ်ခုမှာ ယောက်ကျားနှစ်ယောက်ရှိရင် ရှိသမျှစစ်ထဲဝင်တာ မင်းတို့မိဘတွေတစ်ယောက်မှ မပျော်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ မင်းတို့ကို လအ တွေလို့ပြောတာ။ကရင်တွေမှ လူလည်ကွ။ ။
ကိုက်ချင်နေ သော KIA
မသာ။ မသာ။ မသာ ။ သံုးချိန်တိတိ
K.I.A 99.99%- burmese army 00.99%
ကချင်တွေကြောင့်နင်တို့သေရတာမဟုတ်နင်တို့အလို့အထက်ပြောတိုင်းလိုက်လုပ်နေရလို့သေတာအားလုံးကိုယ်နေရာနဲ့ကိုယ်နေရာအုပ်ချုပ်ရရင်ဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအခုကအထက်ကလူးကြီးသို့မဟုတ်လောဘသားဆိုးတွေကြောင်မသေသင့်တဲ့နိင်ငံ့ရဲဘောတွေနိုင်ငံ့အတွက်မဟုတ်ဘဲသေဆုံးနေရပြီ။ သူငယ်ချင်းသတိရောထားမိရဲ့လား friend
ဘာပဲပြောပြော ကချင်တစ်ယောက်ရဲ့တန်ဖိုးဟာ ဗမာအယောက်တစ်ထောင်နဲ့ ညီမျှတယ်....
HEY, YOU GUYS, what are you talking and put the blame on one another. YOU ALL must understand that WE ALL had been under the BRUTAL,SELFISH and GREEDY,CUNNING,CROOKED MILITARY GENERALS for decades and WE ARE STILL being under the so called DEMOCRATIC PUPPET GOVERNMENT controlled by the previous military leader who is staying behind the curtain. EVEN,now, our AH MAY SU is also organized and being handled by the ACTOR BEHIND the curtain.SO YOU GUYS must understand that IF KIA,ABSDF and their allies defeated,we all will be under the BRUTAL MILITARY REGIME once again and OUR COUNTRY WILL be on the WAY to POVERTY CLIFF.
ရှမ်းတပ်မှာတာဝန်သိသိထမ်းဆောင် ပါလား မင်းတို့ဗမာစစ်တပ်ကိုဘယ်သူက ပြည်ထောင် စုလို့သတ်မှတ်ထားလို့လဲ ဗမာစစ်တပ်ကလူက
ကတုံးရိတ်ထားလို့ ကေတာ့ ကတုံးပေါ့ ကတုံးအေပြာမခံချင်
မသာဆိုတဲ့ကောင် မင်းအိမ်မှာကောင်းကောင်းဆုတောင်းပြီးပြင်ဆထားလိုက်မင်းကချင်မြေကောင် ဆိုတာငါတို့ သိတယ် မင်းအ ခေါင်းစိတ်ကြိုက် ဝယ်ထား
23, 2012 12:05 AM အေပ်ါကရှမ်းအမျိုးသားကြီး မျိုးချစ်စိတ် ရှိရင် ရှမ်းတပ်မှာတာဝန်သိသိထမ်းဆောင် ပါလား မင်းတို့ဗမာစစ်တပ်ကိုဘယ်သူက ပြည်ထောင် စုလို့သတ်မှတ်ထားလို့လဲ ဗမာစစ်တပ်ကလူက ဗမာပေါ့ ကတုံးရိတ်ထားလို့ ကေတာ့ ကတုံးပေါ့ ကတုံးအေပြာမခံချင် ရင် ကတုံးမရိတ်နဲ့ပေါ ခွေးဖြစ်မှတော့ ချီးစားဖို့မကြောက်နဲ့
ဖော်ပြထားတဲ့စာအရ ဗမာနဲ့တိုင်းရင်းသားတွေ ရန်ဖြစ်ဖို့မဟုတ်ဘူး။နှစ်ဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်တွေကိုငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဆောင် ရွက်ဖို့လက်အောက်စစ်သားတွေတောင်းဆိုဖို့လိုတယ်။စောက် ရူးတွေခိုင်းသမျှလုပ်နေရတဲ့စစ်သားတွေကိုယ်စားမင်းတို့တွေရန်ဖြစ်နေမယ့်အစားစောက် ရူးစစ်ခေါင်းတွေကိုသုတ်သင် ရမှာ။
Jinghpaw kasa grai awng dang nga hpe mu lu ai.Ndai zawn maru marang nga she kajaw hkat ai mung laika naura majan langai rai nga ai.Maga mi de myu tsaw mung tsaw myit ni hpe kadu pru wa sha ngun ai hte hpawn manang niamyit masin ni hpe kaju galim byin sha ngun ai awngdang ai masing langai rai nga li ai.God Bless all Kachin People.
မင်းတို့ တွေ ဘာပဲ ပြောပြော ကိုယ့် လူမျိုး စွဲ ဝါဒ နဲ့
ကိုယ် အစိုးရ ကိုသာမက ပြည်သူ တွေ ကိုပါ
မိုင်းထောင် ဆတ်ကြေးကောက် ရဲစခန်း ထဲထိ ပါလာပြီး
အကြမ်းဖက် ဖျက်ဆီး တဲ့ မင်းတို့ ကို တော့ ငါတို့ ပြည်
သူတွေ က အကြမ်းဖက် သမား လူရမ်းကား တွေ လို့ ပဲ
မြင်တယ် ။ မြန်မာ ပြည်သူ တွေ ကစစ်အစိုးရ ကို မကျေ
နပ်ဘူးဆိုတာ ကိုသိတော့ အခွင့်ကောင်းယူပြီး တော့
အစိုးရ မကောင်းကြောင်း ပြော သွေးခွဲ ပြီး နာမည်
ကောင်း ယူချင်တာ ပေါ့ လေ ။ မင်းတို့ သိထား ရ မှာက
အဲဒီ ခောတ်က မရှိတော့ ဘူးဗျ ။ ငါ့တို့ ပြည်သူ တွေ ကို
များမင်းတို့ က ငအ တွေ မှတ်နေ လား ။ မင်းတို့ အ
ကြောင်းကိုလဲ သိသလို အစိုးရ အကြောင်းကို လဲ သိ
တယ် ။ ငါတို့ မြန်မာ တွေ ကလူကိုမုန်း တာကြောင့် စစ်
အစိုးရ ကို မကြိုက်တာက တပိုင်း မြန်မာ နိုင်ငံ ကို ချစ်
တာကတပိုင်းပဲ ။ မြန်မာနိုင်ငံ ကနေ ဖယ်ထွက် ပြီး
သီးသန့် တစင်ထောင် အကြမ်းဖက် လုပ်ရပ် တွေ လုပ်
နေတဲ့ မင်းတို့ ကောင်တွေ ရဲ့ ပါးစပ်က လူမျိုး ကောင်း
စားရေးအတွက် ဆိုပြီး ချီးတပုံ ငုံ ပြီး ပြောပြ နေရင်
တောင် ငါတို့ မယုံဘူး ။ မင်းတို့ လိုကောင် တွေ နဲ့ ပတ်
သက်တဲ့ အရေးမှာ တော့ ငါတို့ က မြန်မာ့တပ်မတော်
ကိုထောက် ခံ တယ်။ မယုံရင် တနိုင်ငံ လုံး ဆန္ဒ မဲ
ကောက်ကြည့် ပါလား မင်းတို့ KIA တွေ စောက်ရှက်
တောင် ကွဲသွား မယ် ။ အကြမ်းဖက် မိုင်းထောင်
လူသတ် ဆတ်ကြေးကောက် လူစု ရတဲ့ ငွေ နဲ့ သေနတ်
ဝယ်ပြီး လူတွေလိုက်ဒုက္ခ ပေးနေတဲ့ မင်းတို့ ကို မြန်မာ
နိုင်ငံ ကပြည်သူ တွေ မပြောနဲ့ ကောင်းကင်က ဘုရား
သခင်တောင် ကောင်းချီးမပေး ဘူး
pilam shayi said...
tsun ai ni hpe mara raw kau yang mu------shan hte masha wa hpe chye myit hkra lani mi karai kasang la jang na ra ai ---- an hte jing hpaw wun pawng sha ni gaw myen mung sha n-re--mung kan ting hpe up hkang na ni re ---dai ma jaw an hteamyit mang ai lam sum ru ai lam hpe --ga loi mung aung pa dang lu sai n-re lu ngut sai ngu bang daga ----lani mi byin wa na ra ai----byin nan byin wa na ra ai-- ram na byin na byin wa na hpe tsun ai nre---lamu de na wa hpe hpang ja htum du hkra kam ga---byin na byin na ra ai ----mung kan ga hpe up hkang na ni re--- hpa majaw n-mai byin na ma --ga sha dawn ngai mung *mung kan ga kaw nga ai mung kan ga na masha langai mi re- majaw mung kan hpe up na re---dai majaw KIA/KIO wun pawng myu sha ni lani mi mung kan hpe up na ni re------byin nan byin wa na re----
kia က အခေါင်းပြင်ရမှာလား မြန်မာ့တပ်မတော် က အခေါင်းပြင်ရမှာလား သားတို့ရေ .... မင်းအဖေပြောမယ်မှတ်ထား ... အခေါင်းပြင်လို့စပြောတဲ့ကောင်ရော အခုအသက်ရှိသေးလား ....... မင်းတို့မကြာခင် ငရဲ သွားရတော့မယ် ............
ဝုတ်လား????နည်း သွား နေ ဦး မယ်။
နိူင်း တတ် တယ်။kia ဆို တာ လု မယ် တိုက် မယ် အ ဆင့် မ ရှိ ပြော တဲ့ လူ မျုိး ကျဉ်း ဝါဒ လက် ကိုင် စွဲ တဲ့ အ ဆင့် နည်း လူသား ဘဲ။
shew da gone ma linda nar tal det
လက်ဆောင်ပေးတဲ့သူတွေတော့ ကုသိုလ်ရဦးမယ် ။ ပေးတဲ့လက်ဆောင်က မွန်မြတ်ပါတယ် ။ သူတစ်ပါး အသတ်သတ်ဖို့ ။ သူပုန်တွေ တောထဲမှာနေပြီး ဘာမှအသိညဏ်မရှိပဲ အမှောင်ထဲကနေ ပျော်နေတယ် ။ ကချင်ပြည်နယ် တိုးတက်ဖို့တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်လေးကတော့ မွန်မြတ်ပါပေတယ် ။ တစ်နိုင်ငံလုံး တိုးတတ်ဖို့ဆိုရင် မကောင်းဘူးလား။ အဲလို တိုးတတ်ဖို့ဆိုတာက နည်းပညာ မြင့်မားအောင် ကြိုးစားရမယ်။ အတန်းပညာ သင်ရမယ်။ တောထဲမှာ နေပြီးတော့ သေနတ်ပစ် သင်ပြီး ဓါးမြတိုက် လိုက် မိုင်းထောင် လုပ်ငန်း ကျွမ်းကျင်နေရုံနဲ့တော့ ငါ့တို့နိုင်ငံကြီး မတိုးတတ်ဘူး ။ အမှန်တကယ် တိုးတတ်စေချင်ရင် အစိုးရက စေတနာနဲ့ တည်ဆောက်ပေးထားတဲ့ ရထားလမ်းတွေ ရေကာတာတွေ ဖျက်စီးစရာမလိုပါဘူး ။ အဲလိုလုပ်တာက တိုးတတ်ဖို့ မဟုတ်ဘူး ။ ဆုတ်ယုတ်ဖို့ ဖြစ်နေတယ် ။ ကချင် ဗမာ ရှမ်း ခွဲနေမယ်ဆိုရင်တော့ ငါတို့နိုင်ငံ တိုးတတ်ဖို့ လမ်းမမြင်ဘူး ။ ကချင်လူမျိုးလည်း တကယ်တော် တကယ်တတ်နေရင် နိုင်ငံတော်က တင်မဟုတ်ဘူး ကမ္ဘာကပါ အသိမှတ်ပြုလိမ့်မယ်။ လူသတ် မိုင်းထောင် အဖျက်စီးလုပ်ငန်းတွေကို ပြောတာ မဟြုတ်ဘူးနော် ။ အလင်းဝင်ပါ ။ မိသားစု စားဖို့ သောက်ဖို့ ပိုက်ဆံ ဝင်ငွေကို ဘိန်းစားအလုပ် မိုင်းထောင် အလုပ်နဲ့ မှောင်ခို အလုပ်နဲ့ ဝင်ငွေမရှာပါနဲ့ ။ အလင်းဝင်ပါ။
မင်းမေ၀က်လား.....ကိုယ့်ကိုကိုယ် ရှမ်းတဲ့...ထ၀ီး...စစ်ခွေးရဲ့...အဲဒီလိုညာတတ်လို့...ဗမာမျိုးရှပ်လို့...တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံး...ချင်နေတာပေါ့ အရူးရဲ့... KIA ဘယ်တုန်းကမှ ဆပ်ကျေး မတောင်းဘူး ကွ... တပ်ထဲက မင်း အဘ တွေဘဲ မိန်းမ ဘော်လီထိ လုတာ... မမြင်ဘူးရင်လဲ.. web site လေးဘာလေးရှာလိုက်ဦး...စစ်ခွေး..ရဲ့... လိုင်ဂူလောက်.. တိုက် ခန်းထဲမှာဘဲနေပြီး.. အဆင့်အတန်းမရှီ တဲ့ခွေးတွေ...